Saddexda Xisbi Qaran ee Somaliland oo Aqbalay go’aankii ay Maanta soo saartay Maxkamada sare |
Saddexda Xisbi Qaran ee Somaliland oo Aqbalay go’aankii ay Maanta soo saartay Maxkamada sare
Kamagra Flavored buy online, zithromax reviews. Saddexda Xisbi Qaran ee Somaliland ayaa Sheegay inay Aqbaleen Go’aankaasi Maxkamadda Sare ee Somaliland Maanta kasoo baxay, kasoo baxay, isla markaana soo dhoweeye Go’aankaas.
Saddexda Gudoomiye ee Saddexda xisbi Mucaarad ee Somaliland oo maanta goob-joog ka ahaa wakhtigii lagu dhowaaqayey go’aanka Maxkamadda Dastuuriga ah ayaa sheegay inay soo dhoweynayaa go’aankaasi ay soo saaartay.
Guddoomiyaha xisbiga Kulmiye, Muuse Biixi Cabdi ayaa Go’aanka Maxkamadda sare ku Tilmaamay mid Wanaagsan oo soo Gaba-gabeeyay khilaafkii siyaasadeed ee Waddanka ka Taagnaa, isla markaana loo baahanyahay in la isku diyaariyo doorashada
“Maanta Maxkamadii sare ee Somaliland ayaa qaraar kasoo saartay arintii mudaba la hadal hayay oo xisbiyadu ku doodayeen in hore loosoo mariyo doorashada, waxay soo saartay in la raaco go’aankii guurtida, Hadalkuna halkaasi ayuu ku dhamaaday, waana la fulinyaa, murankiina wuu inaga dhamaaday waa doorashada oo loo diyaar garoobe.”ayuu Yidhi Muuse Biixi, gudoomiyaha xisbiga KULMIYE.
Guddoomiyaha Xisbiga UCID, Inj. Faysal Cali Waraabe oo isna cabirayay go’aanka ay ka soo saartay Maxkamadda Sare khilaafka ayaa yidhi. “Horta go’aanka maxkamada waa lagu qasbanyahay, inkastoon u aragno qaraarkaasi mid waxyeelo badan gaadhsiinaya dalkeena, hadana anagu waanu ogalaanay waa maxkamadeenii sare ixtiraamkeeda ayay inaga mudan tahay, anagu duuduub ku liqnay kiniinkaa qadhaadh.”
“Go’aanka Maxkamadu soo saartay Sidiisaan ku Qaadanaynaa,” ayuu yiri Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaaradka ah ee WADANI C/raxmaan Cirro.
Si kastaba ha ahaatee, xisbiyadda mucaaradka ayaa sheegay inay ixtiraamyaan go’aankaasi ay maxkamadda ku soo afjartay khilaafka.
Maxkamadda sare ayaa maanta go’aamisay inay ayidsan tahay go’aankii golaha Guurtiddu ugu kordhiyeen madaxweynaha ku xigeenkiisa iyo golaha Wakiiladda oo ahayd 28 March, 2017-ka inay doorashaddo dhacdo.
Ugu dambeyn, muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa khilaaf ka dhashay muddo kordhintii ay samaysay Golaha Guurtiddu ka biyo diideen Xisbiyada Mucaaradka, balse Madaxweynaha ayaa Maxkamadda Sare u Gudbiyey inay fasirto Qodobbada la isku haysto ee Khilaafku ka dhashay; taasoo iyaduna taageertay go’aankii Holaha Guurtidu Soo Saareen.